Vaovao - inona no lamba triblend? Fa maninona no malaza be?
Inona no lamba triblend? Fa maninona no malaza be?
Fa maninona no mafana be ilay lobaka? Rehefa mitady torohevitra momba ny fisafidianana fitaovana hanaovana T shirt mahazatra ny mpanjifako dia azoko antoka fa hanome an-tanana izany aho. Raha manontany ahy ianao hoe maninona, lazaiko anao fa ny triblend tee no zavatra malefaka indrindra nokasihinao.
Araka ny mety ho noheverinao tamin'ny anarana hoe triblend, ny fifangaroan'ny lobaka dia vita amin'ny lamba telo samy hafa. Raha t-shirt 100% ny t-shirt mahazatra, ny tefy triblend dia 50% polyester 25% landy 25% Rayon na 50% polyester 38% landy 12% Rayon, izay mahatonga azy ireo ho malemy kokoa. Kinda dia toy ny T-shirt mahafinaritra izay somary kely kokoa ary mihinjitra kokoa ho azy ireo. Ny ekipanay triblend koa nanao teknolojia manokana ary nanasa azy ireo, avelao izy hahatsapa tena ahazoana aina.
Ahoana ny amin'ny fanontana amin'ny t shirt triblend?
Moa ve io fitaovana triblend hafa io manakorontana endrika sary voatonta eo aminy? Tsy dia izany loatra. Misy fiovan'ny loko kely eo amin'ny triblends sy ny lobaka landihazo, saingy kely ny fahasamihafana. Raha misy izany dia manatsara endrika kokoa ny famolavolana. Azonao atao ny mijery ny sary namboarinay ho an'ny mpanjifanay.
Ka eo no anananao azy: ny fitaovana malefaka malefaka indrindra, ny triblend. Ireto ambany ireto ny volom-bidin'ny triblend antsika, efa vita vonona ireo loko miloko ireo, ny moq mila 120 pcs / loko fotsiny.
T shirt landihazo 100%
Raha te-hanao loko hafa ianao, dia azonay dokoina araka ny kaody loko pantoneo. Ho an'ny 50% polyester 25% landihazo 25% Rayon triblend material, ny namboarina moq loko dia 2000pcs / loko. Raha tsy mila be dia be ianao dia manoro hevitra izahay fa afaka misafidy 50% polyester 38% landihazo 12% Rayon, ny moq dia 500 pcs / loko. Ny serivisy fanoratana loko namboarina dia afaka maimaim-poana.
Te hanangana orinasa mivarotra t-shirt triblend? Andramo ny mifandraisa aminay raha tsy misy kalitao maimaimpoana!
Fotoana fandefasana: Jan-20-2021